Darpan Nepal – धेरै सेक्स गर्ने ब्यक्तिकाे अाचारण यस्ता हुन्छन् ,हेर्नुहोस तपाई पर्नु हुन्छ की नाई[हेर्नुहोस पुरा विवरण]
धेरै सेक्स गर्ने ब्यक्तिकाे अाचारण यस्ता हुन्छन् ,हेर्नुहोस तपाई पर्नु हुन्छ की नाई[हेर्नुहोस पुरा विवरण]
“एजेन्सी # कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी सेक्स गर्लान् त ? यो धेरै चासोको विषय हुनसक्छ । समाजमा आचरण खराब भएका व्यक्तिहरु धेरै सेक्स गर्ने धेरैको सोचाइ हुनसक्छ ।”
“तर, हालै प्रकाशित ‘द ब्रिटिश जर्नल अफ साइकोलोजी’ मा दयालु आचरण भएका मानिसहले सबैभन्दा धेरै सेक्स गर्ने जनाएको छ । उनीहरुको मिलनसार स्वभावका कारण पनि धेरैको मन जित्न सक्ने तथा सेक्सका लागि पनि उत्कृष्ट हुने उक्त अध्ययनमा जनाइएको छ ।”
“अध्ययनका लागि १९२ जना एकल महिला र १०५ जना एकल पुरुष लिइएको थियो । उनीहरुले डेटिङ तथा मेटिङमा पाएको सफलताका आधारमा निष्कर्ष निकालिएको हो ।”
“अध्ययनका क्रममा सेक्सको मामिलामा पनि राम्रा आचरण भएका पुरुषहरु अगाडि देखिएका थिए । जति मानिसको असल थिए त्यति नै उनीहरुले नै बढी सेक्स गर्ने निष्कर्ष अध्ययनमा पाइएको थियो । उनीहरुमा स्वार्थ कम हुने भएका कारण पनि सेक्स पार्टनर भेटाउन सजिलो हुने अध्ययनले देखाएको छ ।”
स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थ दाँत आवश्यक छ । स्वस्थ दाँतले स्वास्थ्यलाई मात्र नभई लुक्सलाई समेत प्रभावित तुल्याउँछ । त्यसैले दाँत स्वस्थ राख्न दाँतको नियमित सफाइ जरुरी छ ।
हरेक व्यक्तिको दाँत सफा गर्ने आ-आˆनै तरिका र शैली हुन्छन् तर दात सफा गर्दा ब्रसको प्रयोग गर्ने तरिका भने प्रायः सबैको एउटै हुन्छ । मानिसहरूले दाँतलाई सही तरिकाले सफा गर्न नजान्दा मानिसहरूले सही तरिकाले दाँत सफा नगर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । चिकित्सकहरूका अनुसार प्रत्येक दिन दाँत सफा गर्दा जिव्रोको समेत सफाइ गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार प्रत्येक दिन दाँत सफा गर्दा दिनमा कम्तीमा पनि दुई पटक दाँतको ब्रस गर्नुपर्छ । दाँत ब्रस गरेपछि नुनपानीले कुल्ला गर्नुपर्छ । दाँतमा सही तरिकाले ब्रस गर्नु भनेकै दाँतको सुरक्षा गर्नु हो ।
दाँतको सफाइ जुनसुकै समयमा गर्न सकिन्छ । चिकित्सकहरूलाई आधार मान्ने हो भने दिनमा कम्तीमा दुई मिनेट ब्रस गर्नु पर्दछ ता कि मुखभित्रको सतहबाट प्लेगको किटाणु बाहिर निकाल्न सकियोस् । यसको सफाइले दाँतको क्षतिसमेत कम हुने गर्दछ ।
ब्रस गर्दा कस्तो टुथपेस्ट छान्ने ?
लगातार ब्रस गर्दा समेत ब्रसमा खराबी आएको छैन भने पनि एउटा ब्रस प्रयोग गरेको छ महिनापछि उक्त ब्रस तुरुन्तै बदल्नुपर्छ । बजारमा विभिन्न आकार तथा लम्बाइका ब्रस पाइन्छन् । चिकित्सकहरू २५ दशमलव ५ देखि ३१ दशमलव ९ मिलिमिटर लम्बाइको तथा ७ दशमलव ८ देखि ९ दशमलव ५ मिलिमिटर चौडाइ भएको टुथब्रश किन्ने सल्लाह दिन्छन् ।
कतिबेला भेट्ने चिकित्सकलाई ?
लगातार दाँतको सफाइ गर्दागर्दै पनि दाँतमा कालो, पहेलो दाग देखिएमा, दाँतमा खाना अड्किएमा , चिसो वा तातो खाँदा दाँत सिरिङ्ग भएमा तुरुन्तै दन्त चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ ।
Previous Postनेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा Next Postजितेन बान्तवा राईको पहिलो सांगीतिक कोसेली “क्षितिज पारीडाडा"सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)